Indlu yangasese. Namuhla, ngezindlela eziningi-ke reinvented injongo yawo nokuthi usizo. Sifuna ubuhle nenduduzo ngisho kule ekhoneni esekusithekeni welinye ifulethi noma indlu. Ikakhulukazi bakhangwa nokuheha eminingi design amaphrojekthi izindlu zangasese, inani elikhulu obuvezwa kuyithelevishini nakuyi-Internet. Nokho, akunjalo kudala, umbuzo yokugezela isakhiwo kwakungelona njengebalulekile. Abaningi kwadingeka ukuba saneliswe yilokho is hlinzeka for them umakhi.
Esikhathini kwamashumi amahlanu, okubizwa ngokuthi uStalin wokwakha izindlu zangasese siklanyelwe nendawo ethize kungekho izikwele engaphezu kweyishumi ziqhubeka. Njengoba ingcebo impumelelo babengebona kakhulu kulendawo kwaba ngokwanele. Yikuphi esikhundleni "Stalinka", "Khrushchev" abangu libhekene yokugezela kuhlangene, nge endaweni kubekelwe izikwele ezintathu. Iningi amakamelo elalihlala okugeza besiyoba sikhulu ka oncibilikisiwe cast iron. Futhi imiqondo ezifana "eshaweni" noma "eshaweni pan", wayengekho.
Namuhla ukuxazulula izinkinga ezincane endaweni ahlale, njengoba iningi labantu namanje bahlala ezindlini ubudala. Nokho, ongakhetha ekuthuthukiseni ukusebenza zangasese yaba okungaphezu kakhulu. Kunzima kuyindaba yokuzikhethela. Okufanele uncamela okugeza noma eshaweni? Cabanga ngokucophelela ngobuhle nangobubi bawo lokubekwa eqhulwini kodaba lokuvulwa.
Bath: izinzuzo nezithiyo
Izinto zesimanje emakethe unikeza anhlobonhlobo ngobhavu esakhiwe ngezinto ezahlukene: metal, acrylic, yensimbi cast and plastic. Bona ayahluka ngobukhulu, umbala nokuma, okuyinto ikuvumela ukuba ufake kuwo kunoma iyiphi indawo. Ngaphezu kwalokho, kukhona njalo ezihlukahlukene ifenisha, ukuze egumbini elilodwa angazamukela zonke izinto kancane nezinye izinsimbi. Lokhu kubukeka yokugezela aesthetically elimnandi futhi emuhle.
Umbuzo ngenxa yothando amanzi okugeza ngabanye kakhulu futhi kuncike esikuthandako. Kuyinto efanelekayo:
labo abathanda yokuthamela amanzi afudumele ezinye kusihlwa, uphumule ageze umzimba wonke;
ngemindeni nezingane ezincane ngubani ukwohlamba eshaweni, ngisho noma eshaweni ugqoko ezijulile, ungakhululekile;
labo abasebenzisa okugeza, simonhlalo, kanye pan ayidingeki eshaweni eshaweni izesekeli.
Nokho, kukhona nemibi. Okokuqala, lokhu:
ukusetshenziswa eliphezulu amanzi, ngenxa yalokho, ukwanda izindleko Izinsiza;
okusezingeni eliphezulu bead zokugeza, okuyizinto kuwumzabalazo ukuba banqobe ngaphandle ukusiza asebekhulile noma abantu abakhubazekile;
ku ukugeza idinga isikhathi esiningi kakhulu (uma kungenjalo, kulula ukufaka eshaweni ugqoko bese usebenzisa eshaweni);
naphezu ezihlukahlukene bobunjwa, okugeza namanje kuthatha isikhala engasetshenziswa ukuze umshini wokuwasha noma i iKhabhinethi ezengeziwe up.
Kuwufanele amagama ambalwa ukusho mayelana eshaweni, ukugqamisa amandla nokubogaboga kwazo ukuhlonza izikhala.
Emincane: ngebuhle nebubi
Emincane ngokwethukela ekubeni esikhundleni esikhundleni kubhavu bendabuko. Noma kunjalo, kukhona njalo ucezu kokungabaza: noma ukushintsha okugeza evamile, wasebenzisa iminyaka eminingi hlambi.
Izinzuzo ezahlukeneyo yesimanje ye izihlambi:
Shower itholakale ukudayiselwa e isethi ephelele evumela eyodwa unhlangothi ukuhlomisa zonke izakhi ezidingekayo we yokugezela.
Kukhona onobuhle eziningi eshaweni, okuyinto zingafani okuqukethwe obusebenzayo kanye nomklamo.
Ukugeleza kwamanzi kuleli ukugeza eshaweni ingasaphathwa.
Shower ugqoko, ngokuvamile replaceable, isayizi esincane, it ngokuvamile konga isikhala egumbini.
Ububi ukuthi bageze izingane ezincane kule divayisi kungelula. Ngo eziningi eshaweni ezivalekile ensimbi Pallet lomphefumulo, uma isetshenziswa wonke amaconsi amanzi ukuthi wawa phezu kwayo, njengoba echo wokugaklazeka kulo lonke efulethini.